Dhamaystiri la telefoonka bricked ma aha wax qof kasta uu doonayo. Nasiib darro, sifooyinka nidaamka adag ee Apple ayaa loogu talagalay in ay sii isbedel nidaamka gacanka iyo haddii aad si ay u sameeyaan isbedel kasta oo la qasbay sida aad iPhone, ay u badan tahay in lagu kaydiyo waayo, dhib aad.
Dhowr ka mid ah sababaha aad ku dhammaan karaan inay bricking aad iPhone waa sida soo socda.
• Kiisasku sida korontadu dhexe ee biligleynaya midna xasuusta
• Soo celinta isticmaalaya gurmad ah musuqmaasuqa
• update Qalad (sida marka la xariirta in iOS9)
• habka update gooyey ay sabab u tahay awood failure
Qaybta 1aad: Sida loo hagaajin bricked iPhone / iPad uu keeno macruufka 9 update
Qeybta 2: Sidee la isaga ilaaliyaa ah bricked iPhone / iPad markii lagu casriyeeyo si macruufka 9
Helay aad iPhone bricked? Waa hagaag, ha ka welwelin sida aan ku leenahay xalka ugu wanaagsan caalamka ee ay dhibaatadan ka mid ah oo ay tahay arrin ka mid sahlan si aad u hesho gacmahaaga iyo isticmaalaan iyo weliba. Magaca xal cajiibka ah waxaa Wondershare Dr.Fone ee macruufka (kabashada xogta iPhone) .
Talaabada 1: Download iyo rakibi Wondershare Dr.Fone on your computer iyadoo la isticmaalayo link ah sida kor ku siiyo.
Talaabada 2: Marka la rakibo dhamaato, abuurtaan Wondershare Dr.Fone dooro ikhtiyaarka ah 'dayactir macruufka si caadiga ah' ka furmo suuqa hoose. Ka dib markii in, ku xidhi aad iPhone in your computer iyadoo la isticmaalayo cable USB ah. In dhowr il biriqsi ah ee isku xidha aad iPhone la kombiyuutarka, Dr.Fone waa in lagu ogaado qalabka iyo waxa ay muujiyaan in ay shaashadda. Hadda, guji badhanka 'Start'.
Talaabada 3: Markaas, si ay u hagaajin ku macruufka jabay on your iPhone, waxaad u baahan doontaa inaad kala soo baxdo firmware ugu dambeeyay. Dr.Fone Ka dhigayaa super si fudud aad u maadaama ay si toos ah u heli doonaan firmware ugu haboon qalab aad iyo aad ha u dooran shaashadda soo socda. Si fudud u riix badhanka 'Download' iyo Dr.Fone samayn doonaa inta kale adiga.
Talaabada 4: Dr.Fone waa in hadda muujiyaan horumarka habka download sida kaaga muuqata sawirka hoose. Ha software ka buuxi Talaabadani waxay si buuxda. Hubi in aad iPhone dhaxyada xiran your computer oo dhan, halka tan.
Talaabada 5: dib u fadhiiso oo wuxuu ku raaxaysan sida mar Dr.Fone dhamayso soo dajinta firmware ugu dambeeyay ee aad iPhone, waa uu sii wadi doono si uu u xaliyo macruufka iyo sii bandhigeen xaaladda sida hoos ku qoran.
Talaabada 6: Marka macruufka ah ayaa go'an ku saabsan iPhone, Dr.Fone xaqiijin doonaa in aad si sida ku cad image hoose iyo sidoo kale sii wadi ku guuleysatey in aad iPhone ay u gaar ah.
Taasi waa! Waa in ay fududahay in la hagaajin iPhone a bricked isticmaalaya Wondershare Dr.Fone. Waxaan rajaynaynaa in aad iPhone weligeed bricked ee meesha ugu horeysa si kastaba ha ahaatee haddii aanu u mijana ama sabab, aad haatan ogaato wixii aad samayn.
Bricking, waayo, kuwa aan weli la hubin, waxay ka dhigan tahay in aad iPhone isu bedeshay leben qaali ah, in inkasta oo ah in fasalka sare, qalab elektaroonik ah oo casri ah, ay hadda tahay oo keliya sida ugu fiican ee leben ah. Waxaa laga naxo waxaas u sheegin, waxyaalahan maqal iyo hubaal maraan, iyadoo xaalad kastaba ha ahaatee wax badan oo inaga mid ah ayaa soo wajahay caqabad inta gradations caadiga ah ilaa macruufka cusub.
Sidaas, waxaan u maleeyey inay noqon doonto fiican haddii aan kuu soo sheegi kartaa waxa la sameeyo ama halkii aad maskaxda ku hayso inta lagu casriyeeyo si macruufka 9, si aad isaga ilaaliso bricking aad iPhone oo haddana ma maraan xanuun idin qabto sida lagu sharxay ka hor.
1. Hubi in aad surin-in aad iPhone in sahayda awood la isku halayn karo ka hor inta aadan bilaabin update firmware in macruufka 9.
2. Hubi in aad ku xidhan yihiin xidhiidh ah WiFi xoog leh oo joogto ah haddii aad dooratay in la gaarsiiyo in ka badan 9 macruufka hawada.
3. waxa dhibic u qabo ku filan oo ah meel lagu kaydiyo hor inta aanad bilaabin hagaajinta firmware in ay macruufka 9. macruufka 9 update firmware ayaa la filayaa inuu ka mid noqon size ee agagaarka 2-3 GB.
4. aad si taxadar leh u maamushaan iPhone sida inta badan waxyeelada hardware jeer ayaa sidoo kale keenaysaa in bricking ee iPhone, gaar ahaan halka lagu casriyeeyo si macruufka ah ka cusub.
5. hore laakiin ma aha yaraan; si loo hubiyo in aad isticmaasho shirkadda siiyaa USB cable haddii lagu casriyeeyo si macruufka 9 ilaa computer ah, sida arrimaha isku xirnaanta oo u dhexeeya computer iyo iPhone inta lagu jiro hagaajinta firmware waa mid ka mid ah sababaha ugu badan oo bricking.
> Resource > iPhone > iPhone u jeediyaa si Brick A ka dib macruufka 9 Hagaaji, Sida loo dayactir Waxaa?